အင်တာနက်ပေါ်က သတင်းမှားတွေကြောင့် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ နွမ်းနေရကြောင်း ရွှေညဝါ ဆရာတော် မိန့်ကြား ~ Myanmar Express
Mrs.Aris will sendaletter to Mahasanga Nayaka? what for and who she think she is? Just because of some Thinganwut holding her picture and keeping her picture in their places she thinks she is above the real MONKs who follow and maintain Buddha Vinaya? this kind of information and news should be displayed with "atouch of reasoning" by the true media which haveatrue intention for moving our country in progressive path while maintaining our identity and core value and Buddhism the way Buddha taught.
ဆုံးမ ရမှာ ဆရာတော်ရဲ့တာဝန်လေ --အသုံးချခံနေရ ပါ့လား ----မြောက်ပေးတာ အဟုတ်မထင်ပါနဲ့-မြောက်ပေးပြီး နာမည်ယူ ။ အတိုက်အခံဆိုလာတွေ့ဓါတ်ပုံရိုက်တင် လူအထင်ကြီးအောင်လုပ်နေတာ တွေတော်တော့ ဟမိမိဘာသာတရားအားထုတ် ပြီး နေပါ ။ ရဟန္တာ မဟုတ်လို့ ကယ်ချွတ်မယ် ဆိုပြီး မာန်တက်မနေပါနဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါ --မာတု ကာမ သာ ဝေါင်းဝေါင်းရှေးပြီး ကုသိုလ်ရအောင်တရားအားထုတ်ပါ---
ဘာကြောင့်အရေးယူရတယ်ဆိုတာကို လူတွေသေသေချာချာ သိအောင်လုပ်သင့်တယ်။ အဲဒါမှ ၀ါဒဖြန့်နေတဲ့လူတွေ ထင်ရာမစိုင်းကြတော့မှာ... လူတွေကသူတို့ပြောတာရေးတာတွေပဲသိပြီး အသေးစိတ်ကိုမသိတော့ ဆရာတော်ကြီးတွေကိုပြစ်မှားနေကြတာ အင်မတန် ငရဲကြီးတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြေငြာသင့်တယ်။